Abamatekisi bahliphiza abatapa ezitolo
NONGQONGQOSHE wezokuPhepha koMphakathi uNkk Peggy Nkonyeni naye uhambele izindawo ezishayekile kuQueen Nandi Drive ethekwini. Isithombe: Motshwari Mofokeng/African News Agency (ANA)
Simphiwe Ngubane | July 14, 2021
INHLANGANO yamatekisi, iSantaco, KwaZulu-Natal isingenelele ekulweni nobugebengu obenziwa ngabantu abazitapela ezitolo, kokunye bazokhele ngomlilo besebenzisa igama lowayengumengameli wezwe, uJacob Zuma.
Lokhu kuvezwe ngusihlalo wale nhlangano yamatekisi esifundazweni, uMnuz Boy Zondi.
Uthe bonke bayafisa akhululwe ejele uZuma kodwa beyimboni yezokuthutha abahambisani nhlobo nezenzo zobugebengu. Unxenxe ozakwabo abangakwazi ukubuyela emgwaqweni basebenze ukuthi bakwenze.
"Asisukumeni sakhe iKZN yethu bafowethu. Asigadeni izimoto zethu, izinxanxathela zezitolo ezisaphila nakho konke okunye okudinga ukuvikelwa futhi sikhulume nalaba bantu abenza lezi zinto ukuthi sekwanele manje. Siyimboni sishayeke kakhulu, nakho lokubuyela esithi akubuyelwe kukhona kuzoba nzima," kusho uZondi.
Uthe bayazi ukuthi izindawo abasebenzela kuzona, njengezinxanxathela zezitolo, zicekelwe phansi futhi uphethroli awukho esifundazweni.
I-Santaco ithathe isinqumo sokuyohlanza imigwaqo namarenki amatekisi ngenhloso yokubuyela emsebenzini emva komiswa kokusebenza kwamatekisi izinsuku ezintathu.
NgoLwesithathu kunxenxwe abakule mboni ukuthi banikele emarenki ekuseni balungiselele ukubuyisela izimoto abasebenza ngazo emsebenzini.
UZondi uthe emva kokukhuculula emarenki bazobe sebethinta ubuholi babo bonke omasipala, izinhlaka ezimele, imiphakathi nabantu ababona ukuthi iKZN kumele ibuyiselwe esimeni esijwayelekile.
AMALUNGU omphakathi waKwaMashu abehalanza esiteshini emuva kokuthi abantu bezitapele izimpahla ezitolo bashiya kumanaphanapha Isithombe: Sithunyelwe
"Uphethroli awukho emagaraji kanjalo nemithi emakhemesi. Abantu ezibhedlela banezinkinga, akukho okuzobelapha. Akungathi kuzanywa ukukhululwa uZuma bese kubulawa abantu abaningi. Imboni ayisikume, abantu basithembile," kusho uZondi.
Unxenxe ozakwabo embonini ukuthi basukume bame nomphakathi ofuna izinto zilunge. Uthe ngalokhu bangakwazi ukuthi babuyisele amatekisi emgwaqweni asebenze.
Uthe baningi abantu emiphakathini asebecele le mboni ukuthi ime nabo ukuze kunqandwe isimo esiqhubekayo.
Kwezinye izindawo ezingamarenki abamatekisi bebebonakala beshanela njengoba kade kugcwele udoti, belungiselela ukusebenza. Nakwezinye izindawo ezakhele iTheku abantu bebezibambele mathupha behlanza izitaladi nasezinxanxatheleni zezitolo ebekutatshwe kuzo udoti zashiywa zimanaphanapha. Maphakathi nedolobha eThekwini izitshudeni bezimatasa zihlanza kanti naKwaMashu esteshini amalungu omphakathi wakule ndawo abehlanza.